Zorin OS 12.2: iyo nyowani vhezheni yeanozivikanwa distro anodzoka aine nhau | Linux Vakapindwa muropa
Isu tatova nechiziviso uye kuvhurwa kweshanduro nyowani yeino kuzivikanwa kugoverwa kweGNU / Linux, ini ndiri kutaura nezvayo Zorin OS 12.2. Iyi vhezheni nyowani inounza inonakidza shanduko, senge kuve yakavakirwa paUbuntu 16.04.3 LTS (Xenial Xerus) uye neLinux 4.10 kernel kuve neinjini inofambisa iyo inoshanda sisitimu ine imwe yakagadziridzwa vhezheni kupfuura yapfuura Zorin OS kuburitswa. Nekushandisa kernel nyowani isu zvakare tine rutsigiro rwezvakawanda zvemazuva ano Hardware zvishandiso nekushandisa akawanda zvazvino madhiraivha.
Kunze kwaizvozvo, iyo Zorin OS 12.2 kugovera kunosanganisira kumwe kugadziridzwa kwakadai seyakajairika bug fixes yakawanikwa uye zvakare mashandiro ane chekuita nekuita uye kugadzirisa mashandisiro, chinhu icho vashandisi vazhinji vanozokoshesa. Zorin's desktop nharaunda yakagadziridzwa zvakare nerutsigiro rwehukuru hwakazara hweakakomberedzwa windows kana uchisimudza iyo cursor yegonzo pamusoro pepaneru hwindo rekutarisa. Pamusoro peizvozvo, mamwe mapakeji akaiswa-mberi mune ino kugovera akagadziridzwawo kune dzimwe shanduro.
Rangarira kuti Zorin OS kugovera uko kwakagadzirirwa kuchinjika kwakanaka kwevashandisi vanobva kumasystem anoshanda Microsoft Windows, sezvo nzvimbo yayo yedesktop yakafanana neiyo Redmond GUI. Uye kunze kwekupa chiitiko chiri nani kune aya marudzi evashandisi, zvakare inokutendera iwe kumhanyisa yemuno Microsoft Windows software nekuda kweiyo Wine chirongwa. Zorin OS 12.2 inosanganisa vhezheni nyowani yeiyi inoenderana layer kuti ikwanise kuisa software yakadai seMicrosoft Office 2013 uye mamwe marudzi ezvirongwa nemitambo yemavhidhiyo yepuratifomu yeMicrosoft.
Kana iwe uchifarira kugoverwa kweZorin OS kana uchida kuwana mamwe mashoko, unogona kubvunza zvinyorwa uye nhau dzichangoburwa mu zviri pamutemo webhusaiti yepurojekiti. Kubva kunzvimbo yekuodhaunura unogona zvakare kurodha iyi vhezheni kana mamwe aripo. Nenzira, iwe unotoziva kuti kuita kuti chirongwa chishande, unogona kusarudza kurodha pasi Zorin OS Ultimate edition ingangoita € 19 kana kurodha pasi iyo Zorin OS Core Essential vhezheni iyo yakanyanya kukwana kune € 0 nekupinda iyo nhamba mune dhawunirodha nzvimbo kana kupa chero mupiro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Zorin OS 12.2: iyo nyowani vhezheni yeanozivikanwa distro anodzoka aine nhau